Sizoletha kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili? : UMartin Vrijland
Manje sesifinyelele esiphethweni sokuthi abaningi abazungezile basuke bengaphili (bheka lesi sihloko), Ngikucela ukuthi ucabange futhi ngaleyo nkulumo. Angisho 'ngendlela yokukhuluma' noma 'ngezifanekiso', cha, ngisho ukuthi angaphili kahle. "Hamba uphinde wandeIsitatimende esaziwayo esivela eBhayibhelini. Akuyona ize, ngoba le planethi yomhlaba kwakudingeka igcwalise ama-biat-avatars angapheli futhi isonto liye lafaka isandla esikhulu kulokhu. Futhi uma ingane izalwa noma iphefumlelwe, kukhona ubhapathizo abazali abanikeza ukulawula kwe-avatar esontweni ngokusebenzisa ubhapathizo lwamanzi ekhanda (bheka ividiyo ngezansi). Lokho kuyisiko sokuqala esilungile ngabalindi bombhalo ukuze babone ukuthi i-baby baby avatar ishicilelwe yini.
Namuhla, iSonto LamaKatolika liyisisekelo esikhulu kunazo zonke emhlabeni jikelele; kanye negazi elihloniphekile elilondoloza ngokucophelela lesi script: isonto ngokulawula izinkolo zayo kanye ne-aristocracy njengeqembu elibusayo kwezombusazwe kanye nebhizinisi elifihliwe ngemuva kokuvela kwentando yeningi, amabhange kanye nezizwe eziningi, lapho izikhonkwane zakwa-bloodline zilawula intonga. Isikripthi esikhulu sikhuluma ngaso sonke isikhathi siphikisana nokuphikisana nokugqama ukuze kugcinwe okwamanje (njengama-plus and minus poles okhiqiza okwamanje). Ama-avatars angabantu abangenalutho (okulula ukwenza uhlelo) abazibeka ekusebenzeni kwalesi sikhwama samandla, kulula kakhulu ukuqhubeka nokubamba lelo phesenti elincane 'lemiphefumulo'.
In lesi sihloko Ngachaza ukuthi ubuchopho bomuntu buhlelwe kanjani kusukela ekuzaleni. Sicela ufunde izihloko ezimbili ngokucophelela ngaphambi kokuba uqhubeke ufunda lapha. Kubalulekile ukuthi uqonde leli zwe nendawo yonke ngokuthi yikuphi: ukumbumbuluzwa.
Kubalulekile ukubona ukuthi (ngokukhiqiza) ukukhiqizwa kwe-bio-avatars okuzikhiqizayo kunomhlobo wobuhlakani bokufakelwa ukuthi sizobe sesiba khona esikhathini samanje. I-bio-ingqondo yomzimba womuntu (isithombe somuntu) uhlakaniphile ngokwanele ukuze ufunde, ulandele izifundo zokuqeqesha, wenze umsebenzi, ujabulele umculo, umdanso, ubukele amafilimu, hamba eholidi futhi ujabulele. Kodwa-ke, kuwukuhlakanipha kwengqondo yomuntu (i-intelligence intelligent level). Izinga elifanayo manje seliqala ukufinyeleleka emhlabeni wezobuchwepheshe, ngakho-ke singakuqonda kangcono.
Izolo umlayezo weza kuwebhusayithi Zerohedge.com lapho kwabikwa khona ukuthi i-Facebook ikhiphe i-AI engasebenza ku-PC elula esikhundleni se-computer enkulu ye-mega kusuka ku-Google Alphabet ekwazi ukufunda umdlalo oyinkimbinkimbi kakhulu Hamba ngesikhathi futhi ushaye umdlali ongcono kakhulu emhlabeni. I-Facebook ithuthukise uhlelo lwe-AI (olubizwa nge-Pluribus) olukwazi ukushaya abadlali be-poker abangu-6 abaphindaphindiwe. Ngakho-ke i-AI ibetha abadlali abaningi ngokusebenzisa imiphumela eyinkimbinkimbi yokunqoba. Umdlalo ofana no-Go ulula kakhulu ku-AI, naphezu kokuthi kunezinhlanganisela ezingaphezu kwebhodi ezingaphezu kwamanye ama-athomu endaweni yonke ebonakalayo (ngoba yonke imininingwane ingatholakali iyatholakala ukuze ibone). Lokhu kwenza kube lula ku-AI ukuqeqesha. Lokhu kuhlukile kwe-poker, ngoba usebenzisana ne-bluff factor yabadlali abaningana. Ngakho-ke i-Facebook yazama ukusungula isitatimende esilandelayo izolo:
"Kuphephile ukusho ukuthi sisezingeni eliphezulu lomuntu futhi ngeke liguquke."
Singabantu i-2019 futhi ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kuyahamba ngokucacile. Sithuthela ezweni eliqhutshwa yi-AI, kodwa asiqapheli ukuthi bakha ikhophi ngaphakathi kwekhophi. Sesivele siphila eqinisweni le-A eliqhutshwa yi-AI futhi umakhi walesi simlinganiso uzama ukusiphululela 'ekuphileni okuphakade' ngokusinikeza isithembiso sokuphila okuphakade nge-transhumanism futhi ngaleyo ndlela sinikeze (okungamanga) ubunye be-AI ukuheha. Lokhu kungukuphila okuphakade okufanayo njengoba sinikelwa ngezinkolo futhi 'umesiya' ngokuqinisekile uzohla 'efwini'. "Umesiya" ozosiklolodela singene (okungamanga) ukuze singasilahli ngisho nakakhulu ku-AI futhi ngaleyo ndlela sisebenzise amandla okudala wesidlali sangempela (osenawo uxhumano lwe-wireless) insimu ye-quantum (njengegciwane).
Noma kunjalo, ngenxa yalezi zintuthuko emkhakheni we-AI, kuya ngokuya kangcono ukuqonda ukuthi i-avatar yesintu i-bio-avatar ekwazi ukuzimela ene-bio-brain esebenza ngobuhlakani ngokuhlakanipha. Isayensi isivele ikwazi ukuphrinta izitho ezivela kolwazi lwe-stem cell futhi okuthiwa sikhule ama-organoids lapho izibonelo ze-3D zobuchopho zakhiwa khona. Ama-brain scans abuye abuyele kahle futhi abantu baqala ukuqonda ukusebenza kobuchopho bomuntu. Kubonakala kunamandla ukuthi ubuchopho bethu buziphatha njenge-bio-processor ehlakaniphile. Esikhathini esincane singaphinda sinyathelise ubuchopho futhi siqiniseke ukuthi yisayizi esifanele ukuqhuba uhlelo olufunayo lwe-AI. Bese singaphrinta ama-avatars e-bio-robot. Yiqiniso lezi zintuthuko zezobuchwepheshe zenzeke ngaphansi kokuxazulula izinkinga ze-Alzheimer kanye nokucindezeleka komqondo noma ukuyeka inqubo yokuguga, kodwa ungacabanga ukuthi kunezinhloso 'eziphakeme'. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ubuchopho busebenza kanjani uma ufuna ukufaka ubuchopho efwini noma ukwenza izibuyekezo nezinguquko. Lokhu kusebenza kuyo yonke imvelo yezinto eziphilayo. I-bio-robot ihlela isistimu yayo ukuze ibeke isisekelo sokuthuthukiswa okungenzeka 'namakhophi angafi.
Isiphakamiso sami ukuthi i-avatar yesintu empeleni ivele ibumba i-bio-robot (i-avatar) ezizimele ngaphakathi kwalokhu okufaniswayo nokuthi amanye ama-avatars alawulwa ngaphandle, kodwa iningi "ama-avatars angaphili". Lokhu kusho ukuthi banikezwa isethi eyisisekelo yekhodi yohlelo (i-DNA) edluliswa ngenqubo yokukhiqiza futhi ingaqeqesha uhlelo oluyisisekelo lwe-AI ku-bio-brain ngokusebenzisa inzalo ukuya enkulumweni yokufunda ithuna.
Ukhetha i-avatar yakho uma uhlanganyela kulokhu okufaniswayo; lokho amehlo akho akubona uma ubheka esibukweni.
Uma sesiyitholile ukuthi lokhu okufaniswayo kugcwele ngokugcwele okungafihli (kodwa ngokuzenzakalelayo okuziphendulela ngokuziphendulela kwe-bio-avatars) futhi igama elithi Non Playing Characters (NPCs) lingathathwa, singabuye siqonde ukuthi akufanele silindelwe kubantu . Ungalindeli amaqembu amakhulu aphikisana 'nesistimu' noma i-block power. Lokhu kungeke kwenzeke, ngoba mhlawumbe i-99% ayihlali. Yingakho ukububula okunjalo kungabhekana nawe uma ekugcineni uhlangana nomuntu ophefumulelwe endaweni ethile kuleli zwe. Kuyaba yize. Yingakho ungase ube nesizungu futhi uwedwa kuleli zwe ligcwele abantu. Yingakho kungenzeka ukuthi uke wacabanga emsebenzini ukuthi abantu abaseduze nawe bangamarobhothi. Konke kufanelana. Ingabe ngezinye izikhathi uzizwa ungaqondakali? Kulungile futhi. Uhlelo lwe-AI aluveli ohlangothini olufanayo lokudala 'ungqimba lobuningi' ukuthi wena (owodwa ezinkinobho ze-avatar yakho) uvela. Yingakho kungenakukuqonda.
Uyisimo semvelo futhi ukhethe ukubamba iqhaza kulokhu okufaniswayo. Kuyinto yokulinganisa igciwane ukuhlola amandla athuthukayo ezinkampani eziyingqayizivele. Ifomu elilodwa eliyimbumbulu lokudala elifakiwe ukuthi uhlolwe futhi kumele uqaphele uhlelo lwegciwane ngalokho okukufanele. Wena (ngenhloso noma ngokungenhloso) uqale ukubamba iqhaza kulokhu ukufaniswa kwe-Luciferian, kodwa nakanjani unenkululeko yokuzikhethela nokulawula. Asikho isizathu sokuzizwa unesizungu. Lokho kuyingxenye yalokhu okungaqondakali. Ucindezelwa. Uzokhohliswa. Ubona izigidi, izigidigidi zama-avatars angenalutho (angalawulwa) AI azungezile. Ukuzifunda ngokwakho ukuziphindaphinda bio-robots ezingaba zihlakaniphile, kodwa azilawulwa kusuka kusendlalelo sangempela. Ngeke neze bakwazi ukuqonda umqondo wokuthi 'umphefumulo' noma 'ugqozi'; ngaphandle kwegama elisetshenzisiwe elivela enkolweni. Ngokwengeziwe bayokwazi ukulingisa ngokwakha ukulinganisa ngaphakathi kokulinganisa. Awusayizizwa unesizungu futhi unqabe ukucindezeleka. Kukhona umuntu obhekene nezinkinobho ezinokubukezwa okuphezulu futhi nguwe. Ungesabi: akukho simo; kungakhathaliseki ukuthi ufika engxenyeni yokufa ngokomzimba: uzoshiya lesi simulation.
Ngakho uma ufuna impendulo yombuzo esihlokweni esithi: "Sizokwenza kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili?", Ngincoma ukuthi ufunde lezi zihloko ze-3 ngokucophelela futhi ngokulandelana kwesikhathi:
Asikwazi ukuxazulula izinkinga emhlabeni ngokucabanga nokukhuluma, kodwa ngale ndlela:
Kunesizathu sokuthi wena namanje sisenqume ukuba lapha. Kungenzeka ukuthi sisesimweni sokuvimba uhlelo lwegciwane noma ukufunda kulo. Nokho, asikho isizathu sokuzizwa unesizungu, uwedwa, ucindezelekile, udumala, noma udangele. Ubuchopho bakho buzwa ukuthi, ngoba bubukeka kuzo zonke lezozinhlamvu ezingezona ukudlala (NPCs) eziseduze nawe; ama-NPC aqala ukugwinya konke ngokungenakuphikelela futhi angalokothi amelane nawo. Lokho ukufaniswa okukuphikisana nawe. Thembela amandla okudala (nokubuyisela) amandla efonti yakho yangempela yokudala (bheka isihloko sokuqala ohlwini).
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: zerohedge.com, theguardian.com
Amathegi: ai, avatar, ugqozi, i-bio avatar, ubuchopho, Facebook, afakiwe, ukuhlakanipha, okufakelwayo, Okwamadoda, okungavinjelwe, angaphili, ama-organoids, I-Pluribus, ifu, umphefumulo
15 July 2019 ku-06: 33
Okubhaliwe kuyabonakala kimi, ngase ngidinga ukukhala, impilo yami yonke ngiye ngizizwa ngingaqondwa kahle, ngokungafani nabanye, ngokuvamile ngedwa nginezinye izikhathi, ngenxa yokuthi angikwazi ukuqonda ukuthi kunabantu abaningi abenza ngamabomu ukungalungi, abangakhethi ngokungazikhetheli futhi abangenakuqhathanisa futhi benze konke, kuyilapho bengingakwazi futhi bengikwazi.
Ngikhuluma ngokuqondile kulokho engikushoyo, ngizizwa, ngikwenze, lokho akukuthandi abantu abaningi (ababuhlungu), ngoba lokho kuvunyelwe futhi akunakwenzeka, empeleni bakubiza ngokuthi 'ukuyala', benethemba lokuthi wena bese ngiphinde ngigxile kahle, ngangihlale nginenkinga yokuzivumelanisa.
Umama wayevame ukusho ukuthi: unenkani, unenkani, uvukela, uthi emva kwalokho: uma nje ngangilokhu ngidlulela esikhathini esidlule.
Omunye emsebenzini wami wangaphambili wathi kimi: uhlanzekile, kamuva ngiqala ukucabanga ngakho, ngoba ngithole ukuthi abantu abaningi abangekho.
Ngendlela yami ngimelene nayo, phakathi kwezinye izinto eziphikisana nemithetho nemigomo eyingqayizivele engangibhekana nayo empilweni yami, yebo ngiyakuba / ngizojeziswa ngenxa yalokho, kodwa angikwazi ukusiza ngaphandle kokuba mina, angizisoli .
Izwe lami lincane nabantu abambalwa abathandayo, ngaphandle kwalokho angikho kwi-Social Media, angivote futhi bahlala kude nezitho zami.
15 July 2019 ku-10: 26
Kuhle ukuzwa lokho. Futhi manje ukuthi uyazi lokhu, sekuyisikhathi sokuba "ungachithi isikhathi sakho lapha," kodwa sebenzisa uxhumano lwakho ngendlela yakho yasekuqaleni ngendlela ewusizo. Ulapha ukuqeda uhlelo lwegciwane bese usebenzisa amandla akho okudala.
Ungakwazi ukuchitha umuzwa wokuba buthakathaka ukuthi i-avatar yakho ubuchopho buye (mhlawumbe / mhlawumbe) ngenxa yokudumazeka kusuka kuzo zonke lezo zivumelwano ezizungezile ezungezile. Ukhulu futhi ungaqala.
15 July 2019 ku-12: 57
Impendulo enhle kuwe futhi enhle ukuthi uyithumele. Ngingathanda ukubona ukuphendula kwabanye abafuna ukwabelana nakho okuhlangenwe nakho kwabo siqu.
15 July 2019 ku-08: 57
I-athikili enhle futhi futhi. Noma kunjalo naphezu kokuthi ngiyasebenza ngedwa kule mphakathi, angikaze ngizizwe ngedwa ngenxa yokuxhumana okuphezulu nami. Lokhu kuphazamisa esikhundleni sokuba nesizungu noma ukucindezeleka. Kuhle kakhulu!
Umbuzo nokho .. Umpristi uhlola kanjani ukuthi umntwana uyaphila ngubobo noma cha? Ngingabona kanjani ukuthi kukhona ophefumulelwe noma cha? Noma ingabe lokho kungenzeka kuphela ngezibuko ezikhethekile njenge-movie ethi "Bahlala"? 😉
Kodwa ngenxa yesitatimende sakho ukuthi ungakhululeka uma uhlangana nomuntu ophilayo, udala yini umbono wokuthi awudingi lezo zibuko? Ngingathanda ukwazi ukuthi uyazi kanjani lokhu?
Siyabonga kusengaphambili ..
15 July 2019 ku-10: 02
Uma abapristi bengabakwa-avatars abalawulwa umakhi (noma ithimba lomakhi) - futhi libizwa ngokuthi ukulawulwa kwe-arvhontic - ngakho-ke, kunjalo, izibuko zaseLuciferi ezikulo mboniso.
15 July 2019 ku-10: 04
Futhi wazi kanjani ukuthi othile uphefumlelwe? Uyazi lokho. Uthuthukisa lo mqondo noma (kunalokho) unayo kusukela ekuzalweni.
15 July 2019 ku-11: 45
Kuhle lokho. Ngakho uma uhamba emgwaqweni uzitshela; "Kubuhlungu futhi akusiyo"?
Ngeshwa angikwazi ukwenza lokho ...
15 July 2019 ku-11: 58
Kwabanye, le radar yemvelo incane kakhulu noma ayisetshenziswanga (isuswa ngumfanekiso wesistimu). Thula futhi uphinde ulalele ukuxhumana komphefumulo wakho nokuqala kwakho.
15 July 2019 ku-12: 12
Yebo, yilokho okusebenzayo. Ukuthembeka, kungcono kunalokho. Manje sekuyinqaba ukubona abantu abathandayo abadlula ukuthi kubonakale kakhulu uma othile ephefumulelwe.
15 July 2019 ku-13: 23
Mhlawumbe behluleka kangangokuthi angiyizibophezele kubo. Kuze kube manje, ngidinga isikhathi ngaphambi kokuba ngiqinisekise umuntu ngokuthi "angavinjelwe". Ngithemba ukuthi esikhathini esizayo ngizokwenza Ukukhanya kweso kungenza .. 😉
I PFC ngokumelene no Amygdala wabhala:
16 July 2019 ku-12: 20
Ngaphezulu kwe-80% yabantu abasebenza 'kumhlaba' wanamuhla ngaphakathi kwendlela eshaywe ngayo. Bazigcina behlala 'endaweni yabo yokududuza', imodi ephephile ebuchosheni babo. Baxhunyiwe kusuka ekuxhumaneni kwemvelo 'nemvelo', indawo yonke, inhliziyo yabo siqu ... Awusekho kabusha ngokuphefumlelwa kwasekuqaleni ... Ezimweni eziningi le nhlangano ibanjwe ngokungazi kahle ...
16 July 2019 ku-12: 37
Imvelo kanye nomhlaba wonke kuyingxenye yokulingiswa. Kubalulekile ukubona lokho. Ngakho-ke kufanele uphinde uhambisane nomuntu wakho wokuqala, kodwa ukuze ubone lokho, kuyasiza ukuqonda okushiwo yizihloko.
15 July 2019 ku-12: 06
Iningi labantu abangaphilile lilawulwa iminyaka ngemisebenzi yokulawulwa kwengqondo njengenkolo nokuhlelwa kuzo zonke izinhlobo zezindlela zobuchwepheshe (i-TV, ezokuxhumana nabantu, njll). Esikhathini esizayo esiseduzane, isikhombimsebenzisi se-brain-cloud sizolawula izimbangi kalula, okwenza umuntu ophefumlelwe abuye aphile. Kubalulekile ukugwema zonke lezo zithonya zangaphandle kwi-bio-ingqondo ngangokunokwenzeka.
15 July 2019 ku-17: 11
Ucabanga ukuthi abantu abangaphilile bangakwazi ukuphefumulelwa, bonke baphefumulelwe ngokomgomo? Noma kunalokho, ingabe wonke umuntu uhlala emhlabeni?
15 July 2019 ku-18: 38
Uma ufunda izihloko ze-3 namazwana abekiwe kulesi sihloko uzobona ukuthi ngombono wami akusilo iqiniso.
Akuwona wonke umuntu ozalwa ophefumulelwe. Ukhetha i-avatar yakho emdlalweni: uzozalwa ngokuphefumulelwe. Okunye kugijima kuphela ku-AI (ebizwa nangokuthi i-ego).
Qaphela: i-avatar elawulwa ngaphandle (noma nguwe "njengomdlali" noma eqenjini lokulawula) nayo inesistimu ye-AI (ego). Lokhu kungabangela ukuthi ngezinye izikhathi i-avatar ingayinaki ukulawula kwayo kwangaphandle (okuyinhloko yimbangela yokuhlela kusuka ebusweni kuya ethuneni).
15 July 2019 ku-21: 02
Kukhona indlela eyodwa kuphela yokubuyela emuva futhi eyimvelo. Lapho ngiya edolobheni ngelinye ilanga, konke lokho okufana nami kuyangenza ngizizwele. Nomaphi lapho abantu behamba ngezingubo nge-Saturn ukukhulekelwa noma izimpawu zemilingo. Ziyakhuthazwa yizinsimbi zomculo nabaculi abadumile ngenxa yesizathu. Kuthathwa ngokuzenzakalelayo, ngaphandle kokungabaza noma imibuzo. Uzwa futhi uwubone yonke indawo, ngaphandle kwelidolobha emvelo. Kumelwe sibe khona ukuze sizihlanze, umphefumulo wami uyazi ukuthi ngokuqinisekile.
16 July 2019 ku-13: 47
Ngisanda kufunda kuMartin ukuthi "imvelo kanye nomhlaba wonke ziyingxenye yokufanisa. Kubalulekile ukubona lokho. Ngakho-ke kufanele uphinde uhambisane nomuntu wakho wokuqala, kodwa ukuze ubone lokho, kuyasiza ukuqonda okushiwo yizihloko. " Ngibhalisele kule sayithi. Ngizofunda izihloko ezihlukahlukene ngalokhu ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngigcwalisa ekucaleni kwami ​​'kokuvuka'.
16 July 2019 ku-20: 14
Ngifunde lokho futhi. Ucabanga ukuthi ungathola nini kalula? Uma uzungezwe ukucindezeleka nama-frequencies aphansi noma uma uhanjiswe ngezikhathi zomzimba 432hz.
Ngempela imvelo iyingxenye yalokhu okufaniswayo, kodwa lena ikhophi okuvame ukunciphisa imvamisa. Ungathola isendlalelo sangempela ngokuthola indawo efanele ngaphakathi kwakho!
Akufani ngempela nefilimu yokuqala ye-matrix ukuthi ukudla kwethu okuyinhloko okudliwayo kufanele kudle ukuze kuphile. Lokho kuyiqhinga lokugqugquzela lesi simulation.
17 July 2019 ku-12: 35
Isixazululo sibonakala sengathi "i-blood over intent" (google noma usesho ku-youtube) isitatimende sokususa i-karma embi ukuthi uqhubeka uphinde uvuselele. Igazi linamandla futhi lingasetshenziswa kokubili kokuhle nokubi. Uba ngenye ye-144000 (ibible) futhi ungabuyela emuva uma uqobo "ufa" (hhayi emuva kwikhompyutha yegciwane) Bayazi ukuthi uMartin uye waphenya yini lokhu futhi angangena kuwo futhi abhale ngakho.
17 July 2019 ku-16: 18
Uma le simulator yemvelo igijima ngaphakathi kokulinganisa okuhlukile, "ukulinganisa okuphakeme" (okuyiyo egijima kuyo) ungakwazi ukudukisa umdlali ngenketho yokuphindukuzalwa, ngoba akaqapheli ukuthi lokho kuyingxenye yokulinganisa (ake sithi) ukubiza ngokuthi "igumbi lokulinda lokulinganisa").
Ngamafuphi: awudingi ukuphindaphinda. Kumele uqhubeke ukhumbule ukuthi uphonswa ngokufaniswa nokuthi njalo ugxile kwifomu lakho lokuqala lokusebenza (lelo fomu lokuqala lokuqonda elivela "ku-stem cell") elinomsebenzi wokudala.
Kodwa-ke sicabanga ukuthi lezo zindaba zokuphindukuzalwa ziyiqiniso. Sike sabona ubufakazi obuqinile balokho?
17 July 2019 ku-18: 37
Ubufakazi obunzima bungase bube bukhulu kakhulu ukubuza. Ngiyazi uprofesa, wezifo zengqondo, u-Ian Stevenson wenze ucwaningo olujulile nokujulile ekuphindukuzalwa kabusha, ikakhulukazi nezingane ezingakhumbula impilo yangaphambilini, nemininingwane. Izinto ezithakazelisayo, amamaki okuzalwa kanye nokukhubazeka kokuzalwa wadlala indima enkulu kulokhu.
17 July 2019 ku-20: 38
khumbula indaba yomfana waseSiriya owazi umbulali wakhe (esikhathini esidlule) futhi wakwazi ukuthola indawo yesidumbu.
17 July 2019 ku-20: 39
Konke okungachazwa uma ubona ngokusebenzisa imodeli yokufanisa.
18 July 2019 ku-18: 49
@Martin, ungaqhubeka uphakamisa leso sisho?
Ngokwebufakazi bokuthi @Zonnetje no-@ZandinOgen bakhona, kanye nobufakazi babaphenyi ababika ngokuthatha umhlalaphansi wabantu abaye bahlangabezana nokuhlangenwe nakho 'okucishe kufile' abangakwazi (ngenkathi ngaphansi kwe-anesthesia) batshele lokho odokotela abahlinzayo bathi Igumbi lokusebenza kanye nabahlinzayo abafanayo baqinisekisa ukuthi ngemva kwalokho (ukuthi ngempela bakusho lokho), lokho kusho ukuthini inkolelo yokufanisa?
18 July 2019 ku-19: 04
Kulungile, emva kokufunda ukusabela kwakho kwangaphambili 'kwegazi phezu kwenhloso' futhi, usho ukuthi ngemuva kokufa kwakho uphela 'ekamelweni lokulinda' futhi uma wenza isinqumo esingalungile lapho, uphinda futhi kuvuselelwa.
Lokho akuguquli iqiniso lokuthi kunobuningi (obunzima) ubufakazi bokuthi imithwalo yangempela yenzekile, akunjalo?
18 July 2019 ku-20: 22
Izindaba azikho ubufakazi obukhuni. Ziyizindaba.
18 July 2019 ku-21: 02
Khona-ke ubufakazi bokufakaza enkantolo nabezindaba.
18 July 2019 ku-21: 09
Mhlawumbe yilokho okuyiyo. Ngaphandle uma kukhona ofakazi abaningi abaveza okufanayo .. Khona-ke ijaji linikeza inzuzo yokungabaza ..; )
18 July 2019 ku-21: 42
Kulo mongo, mina ngokwami ​​ngingujaji ..
20 July 2019 ku-02: 04
I-100% ngokuqinisekile ivuselelwa kabusha ngempela. Lapho wena (ukukhala) uvuka emkhunjini, umphefumulo wakho ungene kulowo mzimba. Inkinga ukuthi asikwazi ukukhumbula umlando wethu. Angikholelwa ngesikhathi futhi ngikholelwa ukuthi umphefumulo unomdlandla wokungena emlandweni. Ngiyakholelwa ekuthuthukiseni umphefumulo, ngaleso sikhathi uzobona ukuthi awusenaso into ongayibona ezingeni eliphansi. Lowo mzuzu usufikile manje, ungaqoqa ulwazi oluningi okwamanje ukuze ubalekele. Kunabantu abaningi kakhulu abaye bakhohliswa ukuthi izinga lapha emhlabeni liphansi kakhulu. Cabanga uma manje uvukile endaweni ethile futhi ungasebenzisa zonke izifundo ozibonile kule nqanaba. Khona-ke awufuni ukuwa futhi. UMartin ufuna ukwenza lokho kucace, ungalingwa yizo zonke izindlela zobuchwepheshe, ngoba sesivele samukele lokhu ngaphambili. Umthombo wethu wolwazi oluhlanzekile womphefumulo uphonswe ukuze senze amaphutha afanayo futhi.
Yingakho ukuphindukuzalwa kuleli zinga akuyona isisombululo futhi yinkinga ebaluleke kakhulu okumelwe siyixazulule.
20 July 2019 ku-08: 30
Izwi elizwakalayo. Ngokuqondile: yazi ukuthi akudingeki ubuye.
Uhlala phakathi kwabantu abaningi abangaphilile abakhona lapho ukukugqugquzela ukuba unikezele ohlelweni futhi kukwenze uzizwe ubuthakathaka uma "uphambuka".
Woza ekutholeni ukuthi uhlala ekufaniseni. Sicela uqaphele! Okubalulekile: ukuguqulwa kwegciwane le-Luciferian okuhloswe ukuthelela umsuka wazo zonke izikhona. Uma uthola ukuthi ukuqonda kwakho (okuvela e-stem cell yezinto ezikhona) kuyilungu elilodwa lokudala, khona-ke uzothola ukuthi ungamelana nomakhi walesi simiso segciwane kanye nesistimu yegciwane ngokwayo. Lokhu akunakwenzeka kule SIMS (le vio-avatar yomuntu), kodwa uzokwenza lokho ezingeni lakho lokuqaphela. Ungazivezi ngokweqile ngalokhu okufaniswayo. Kuyinto "umhlaba wephupho" kuphela. Awukho ngempela lapha, ubukele (futhi udlale) ngokufanisa.
20 July 2019 ku-10: 26
@guppy amagama akho ahlaziya ngombono wami walesi simo sangempela. Kusukela ngisemncane ngangihlale ngibheka isimo sengqondo sokubheka, ngingazi ukuthi ngingazi ukuthi kukhona okungahambisani nombono wami wokubheka ngalesi siminganiso lapho sithathwe khona. Angikaze ngihudulelwe ekucabangeni okungenangqondo, ngihlale ngizibuza ukuthi kungani, futhi isimo sengqondo esivulekile sokuthola iqiniso yisici esibalulekile okufanele ube nalo. Izingane ikakhulukazi kufanele zikhuthazwe ukuba zicabangele ngokucophelela futhi zihlale zibuza ukuthi kungani umbuzo, kushukumisa ukwazi, qalisa usesho .. Silapha ukukhula ngokomoya, ukuzwa nokuthola indlela yethu emuva ngaphandle kokuwela emigodini sibuyela kumthombo wendawo yonke. Abalindisango balokhu beqiniso baqaphela ukuvuswa futhi sebezama ukufaka ukukhiya kwezobuchwepheshe emnyango.
« Q Anon, ukuvulwa kwe-Epstein, uxhumano lukaClinton, 'umphakathi weqiniso': kuzobe kunjalo!
Inhlekelele yomoya ye-MH17: yini enye esingayikholelwa? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 11.555.743
UJeffrey Epstein uzibulela esitokisini sakhe (ukubuyekeza)
Ukukhuthaza: mahhala eholidini noMartin Vrijland
guppy op Iyingozi kangakanani i-5G nokuthi ifakwe ngasese kanjani
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.613